DF oo ballan qaad ka sameysay dilkii Gudoomiyaha Suuqa Bakaaraha. - Caasimada Online
Home Warar DF oo ballan qaad ka sameysay dilkii Gudoomiyaha Suuqa Bakaaraha.
DF oo ballan qaad ka sameysay dilkii Gudoomiyaha Suuqa Bakaaraha.
Warka ka soo baxay Masuuliyiinta maamulka Gobalka banaadir ee Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa uu ku hanjabay inay gacanta kusoo dhigi doonaan cidii ka dambeysay dilka loo geestay Gudoomiyihii Gudiga ganacsatada suuqa bajkaaraha.
Warsame Maxamed Xasan Joodax oo Gudoomiye ah ku xigeenka dhanka ammaanka ee Maamulka Gobalka Banaadir la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Dowladda Soomaaliya ay sameynayaan baaritaano xoogan oo ku aadan hanaanka ammaanka dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Wuxuu sheegay in Dowladda Soomaaliya aysan marnaba ka hari dooni dhagarqabayaasha geestay dilka Gudoomiyaha gudiga ganacsatada suuqa bakaarah ee saaka la dilay.
“Laamaha ammaanka Dowladda marnabakamahari doonaan cidii ka dambeysay dilka loo geestay Guddoomiyaha Suuqa Bakaaraha weey naga go’an tahay inaan ammaanka xaqiijino”
Saakay ayay ahayd markii Gudoomiyihii Suuqa Bakaaraha lagu dilay Isla Suuqa.